မြန်မာတေးသီချင်းနုတ်သင်္ကေတများ: (၂၆) ၀ိုင်ဝိုင်း
(၈၅) စိုးသူ(၈၆) ထွဏ်းထွဏ်း(၈၇) ဗညားဟန်(၈၈) ဗစ်တာခင်ညို(၈၉) ဟေမာနေ၀င်း
မဆုံတဲ့ဖူးစာ ( Guitar Pro Notation )
မဆုံတဲ့ဖူးစာ ( Oriental Notation )
တယ်လီဖုံး( Guitar Pro Notation )
တယ်လီဖုံး( Oriental Notation )
အချစ်မဲ့နိဂုံး( Guitar Pro Notation )
အချစ်မဲ့နိဂုံး( Oriental Notation )
လမင်းနဲ့ပင်လယ်( Guitar Pro Notation )
လမင်းနဲ့ပင်လယ်( Oriental Notation )
မခေါ်ရက်ဘူး( Guitar Pro Notation )
မခေါ်ရက်ဘူး( Oriental Notation )
ပုန်းရှောင်သူ( Guitar Pro Notation )
ပုန်းရှောင်သူ( Oriental Notation )
သမင်လည်ပြန်( Guitar Pro Notation )
သမင်လည်ပြန် ( Oriental Notation )
သမင်လည်ပြန်( Oriental Notation )
ဟိုတစ်ချိန်ကနှင်းဆီ( Guitar Pro Notation )
ဟိုတစ်ချိန်ကနှင်းဆီ( Oriental Notation )
စည်း ( Oriental Notation )
အဲဏီ( Oriental Notation )
ဖြေသိမ့်လိုက် ( Oriental Notation )
ဖြေသိမ့်လိုက်( Oriental Notation )
ကြိုးမဲ့စွန် ( Oriental Notation )
ကြိုးမဲ့စွန်( Oriental Notation )
အချစ်ငှက် ( Guitar Pro Notation )
အချစ်ငှက် ( Oriental Notation )
အိမ်လွမ်းသူ ( Guitar Pro Notation )
အိမ်လွမ်းသူ ( Oriental Notation )
ကျေးဇူး ( Guitar Pro Notation )
ကျေးဇူး ( Oriental Notation )
ထာဝရအဆုံးထိ ( Guitar Pro Notation )
သင်ခန်းစာ( Guitar Pro Notation )
ဒူးထောက်ပြီ( Guitar Pro Notation ) Solo only
Immortal Thanks go to Sir Aye, Ko Steve, his Chinese Comrade ... Ru Shin Yan and rfanquee . Posted by
samsonSeptember 27, 2011 at 10:21 PMအထီးကျန်ဝိညာဉ်(၀ိုင်ဝိုင်း) ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးပါဦးခင်ဗျာReplyDeletebiakOctober 20, 2011 at 8:06 AMit's really help full. thank you very much!!!!ReplyDeleteMyanmar Muisc NotesJanuary 8, 2012 at 6:30 AMထာ၀၇အဆုံးထိ Tabber = ဂစ်တာချစ်သူ ကိုအောင်နိုင်ReplyDeletekyawFebruary 11, 2012 at 9:16 PMထာဝရအဆုံးထိ သီချင်းကို ပရို ၅ နဲ့ တင်ပေးပါလားဗျာReplyDeletehtet myat aungMay 26, 2012 at 6:21 AMgreat. i give you five stars.ReplyDeleteHlaing myoAugust 28, 2012 at 5:30 PMdo htouk pe ( wyne wyne ) tin pay ohn nay ako toe :PReplyDeleteMyanmar Muisc NotesDecember 5, 2012 at 9:47 AMသင်ခန်းစာ နုတ်ကို လှူသူမှာ ကိုစစ်အောင်ဖြစ်ပါသည်။ReplyDeleteAdd commentLoad more...